Nangkaitra any Thailandy " Journey-Assist - Voankazo any Thailand. Vidiny amin'ny vanim-potoana
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Tantely any Thailand
Nofera (Nangka, Ka-mitata)
Voalohany indrindra, ny nangka no voankazo lehibe indrindra eto an-tany! Ny lanjany dia mety hahatratra 30 na kilao ary manana savaivony hatramin'ny 60cm.
Hazo mofo aziatika
Any Azia, antsoina koa ny mofomamy, ho an'ny sandany sy ny fidirana aminy, satria miakatra hatraiza hatraiza any amin'ny firenena any Azia Atsimo Atsinanana izy io. Amin'izay fotoana izay ihany, ny zava-drehetra dia ampiasaina ao anaty nosy, avy amin'ireo faritra azo hanina izay amboariny ny balahany, mankany amin'ny aloky ny matevina izay mamahana ny akoho.
Inona no azo atao amin'ny nangka
Ary amin'ny fandrahoana sakafo, ity voankazo goavambe ity dia manana fampiasana betsaka amin'ny salady, sy amin'ny serealy ary amin'ny tsindrin-tsakafo. Ary any amin'ny fivarotana any Thailand, dia afaka mahita jamam-boanjo ianao ary na chips aza. Ireo fananana ireo dia namela ny nangka hahazoana laza malaza any amin'ny firenena any Azia atsimo atsinanana.
Ny hazo ny nosy dia manana fananana mahasoa maro kokoa. Ohatra, ny fanaka sy ny mozika dia vita amin'ny kitay, ary ny pigment dia ampiasaina amin'ny fanaovana pigments avy amin'ny volom-borona, izay hoso-doko amin'ny akanjo volom-boasary makirana.
Ny zava-misy mahaliana dia raha manendy nosy amin'ny afo ianao dia hanitraitra toy ny mofo vaovao.
Mba hanandrana dia asiana akama amam-bavony maina, melon, anana, papaya.
Ny sandam-bary any Thailand
Ny vidin'ny ny ambo dia 25-40 baht mandritra ny 1 kg. Na dia amin'ny faritra mandroso mpizahatany aza dia mety ho lafo kokoa.
Mazava ho azy fa ho lafo kokoa izany raha vidinao voahitsakitsaka izy, tapatapahina. Fa tokony ho ao an-tsaina fa ny ampahatelon'ny voankazo ihany no hohanina. Ary raha manisa ianao dia tsy ho lafo intsony ny vidin'ny nangka voahiry
Vanim-boasary any Thailand
Vanim-boasary mandritra ny taona!
Ahoana ny fomba hisafidianana ny hala
Any Thailand, any amin'ny faritra malaza amin'ny mpizahatany, ny foza dia amidy efa tapaka ary tsy misy na inona na inona hofidina.
Natsororoka nanasaraka ny sakamalaho.
Nefa raha mbola te handray ny voankazo iray manontolo ianao dia mila mandinika tsara amin'ireto hevitra manaraka ireto:
Tokony mavo miaraka amin'ny felaka volontsôkôlà ny loko mavo.
Tsy maintsy misaraka amin'ny lelan-tsokosoko ny lela eo amin'ny voanjo (amin'ny voankazo tsy dia mitombo, akatona miaraka amin'ireo fitoeran-dàlana)
Ny voankazo dia tokony hanana fofona malemy nefa maharitra. (voankazo tsy masaka tsy misy fofona)
Raha mividy ampahany amin'ny voankazo ianao, dia alao antoka fa ny nofo dia manana loko fanosotra sy luster fanamiana (raha maina ny tany, dia tsara kokoa ny tsy maka noka toy izany).
Aza mividy voa izay mampiseho fahasimbana miharihary. Ireo matetika dia mivarotra amin'ny fihenam-bidy. Saingy misy ny risika mety ho ratsy ny tsirony na raha ny voankazo efa mihintsana aza.
Azonao atao ny mamantatra ny fahamatorana amin'ny foetus amin'ny feo. Tsindrio eo amin'ny velon-jaza. Ny feo dia tokony hosokosoka, izay manondro fa mitovy foana ny atiny. Raha tsy mahay ilay feo, dia mbola tsy matotra ilay foetus.
Tokony ho hentitra ny felam-boninkazo. Raha mora misolosotra azy, dia efa tafahoatra ny voankazo.
Ahoana ny fahitana hamonosana sy fihinanana am-boanjo
Tokony eritreretina fa ny voankazo mihavitsy matetika dia ny ampahatelony ihany no azo hanina. Noho izany, miomàna hiomana miaraka aminy alohan'ny hanarato ity fahatelo azo hanina ity.
Ny voalohany sy ny lehibe. Alohan'ny hanapahana ny nangka, ny tanana dia tsy maintsy asiana menaka manosotra (voaniho, oliva na hafa), satria ny faran'ny voankazo dia misy lataka matevina. Na mampiasa gwana fonon-tanana.
Amin'ny maha-fitsipika azy dia voatsapa antsasaky ny voankazo fotsiny ny voankazo ary avy eo famafazana voankazo namboarina tamim-pitandremana miaraka amin'ny antsy.
Midika koa izany fa misy taolana lehibe ao amin'ireny lobule ireny.
Ao anaty nosy, tsy azo ihodivirana ny zava-drehetra afa-tsy ireo atody ireo.
Ny tombony azo avy amin'ny nantsona
Ny tsongota dia manisy lanjany lehibe sy fibra malefaka.
Ao koa ny sangan'asa izay ahitana otrikaina A sy C be dia be.
Ny asidra fololika sy betacarotene dia misy ihany koa amin'ity voankazo mahasalama ity.
Ny sakamalaho dia mahasoa amin'ny rafi-pitondran-tena, ho an'ny lalan-drà sy hozatra, manome normal ny fizahan-dra, noho ny magnesium, kalsioma, phosphore, ary potasioma izay misy ao anatin'izy io.
Noho ny fisian'ny starch ao amin'ny fandrafetana azy (mihoatra ny mofo) dia omena fahafaham-po tsara ny nala, ary miaraka amin'ny kaloria lasa tsy dia mahazatra.
Ity voankazo ity koa dia manana fananana antikristy tsara, ary amin'ny ankapobeny dia misy fiantraikany mahasoa amin'ny fiasan'ny vavony.
Ny sotro fisotro dia tsara ho an'ny hoditra, ho an'ny maso.
Ny fisian'ireo phytonutrients am-bava dia miasa toy ny fisorohana anti-homamiadana, ary amin'ny ankapobeny dia manohana ny rafi-kery fanefitra amin'ny endrika tsara.
Ary koa, ny hazom-borona dia atsy Azia dia heverina ho mitondra vintana, satria ny eo an-toerana dia manandrana mamboly eo akaikin'ny tranony.
Mila zatra tsikelikely ianao. Ny fihanaky ny voankazo ity dia mahavita mampahatezitra ny vavony.
Amin'ny ankapobeny, raha tsy misy ny tsy fandeferana amin'ny iray amin'ireo singa mamorona nangka, dia azonao atao tsara ny mihinana azy. Averina indray, ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy fampiasana be loatra azy io ary mihinana azy be loatra, toy ny voankazo hafa.
Any India dia masaka ny akoho feno voankazo, ary ity lovia ity dia hita fa tena mahaliana amin'ny tsiro. Ary amin'ny ankapobeny, ny lasopy sy ny pie ary ny marinade dia vita amin'ity voankazo ity ... fa zavatra maro :). Ampiasaina betsaka amin'ny sakafo Aziatika atsimo atsinanana izy io. Ny ravina nangka dia azo hanina ihany koa :).
any Azia, ny nosy dia antsoina hoe hena na legioma, satria mahavita manolo hena sy mofo ho an'ny zavatra mahavelona sy sakafo mahavelona, ​​ary mandritra izany dia mitombo na aiza na aiza.
Misaotra amin'ny fampahalalana mahasoa 🙂.
Tany Sri Lanka (Trincomalee) dia nitsidika olona teo an-toerana izahay, ary notsaboina tamin'ny nangka, izay hohaninay. Sambany izy no nihaona voalohany. Mahaliana voankazo toy izany. Sarotra ny mamantatra azy amin'ny zavatra :).
Ary eny, any Sri Lanka, any Bali, dia matetika ny hazo misy goavam-be goavambe mihantona mivantana eo amin'ny hazo. Any Thailand, tsy tadidiko ny hihaona amin'izy ireo.
Tamin'izany fomba izany dia nanontany tena ny olona iray raha mampidi-doza ny mandeha ao ambanin'ny hazondamosim-be. Mitovy ihany, voankazo toy izany raha mianjera amin'ny lohany, avy eo angamba ny manembaka ihany no tsy otmazatsya :). Ka tany Bali aho dia nihaona tamin'ny hazo iray izay tao anaty voankazo naniry dia natsipy tao anaty harona izay nilatsaka ilay voankazo. Angamba angonina ry zareo :).
Manana ampahany telo azo hanina izy.
Fandriana taolana 1
2 Fibes miaraka amin'ny menaka
Mamy ny fandriana. Ny tena matsiro amin'ny nangka rehetra.
Ny fibre miaraka amin'ny pulp dia tena matsiro, raha voatsary tsara ary andrasina.
Ary ny taolana hanandrana toy ny trondro nendasina)